Euro In Oo shilin Soomaali sarrifka maanta. Euro qiimaha Oo shilin Soomaali maanta.
Euro In Oo shilin Soomaali sarrifka maanta
1 Euro (EUR) uyeelaysaan 617.46 Oo shilin Soomaali (SOS)
1 Oo shilin Soomaali (SOS) uyeelaysaan 0.00162 Euro (EUR)
Warbixin ku saabsan qiimaha Euro to Oo shilin Soomaali ayaa la cusbooneysiiyaa maalintiiba hal mar. Goobtu waxay muujineysaa iskucelceliska qiimaha beddelka Euro galay Oo shilin Soomaali. Qiimaha sarrifka lacagaha Euro to Oo shilin Soomaali oo laga soo qaatay keydka macluumaadka lagu kalsoon yahay. Qiimaha sarrifka Euro to Oo shilin Soomaali waa aasaaska bangiyada iyo qiimahooda sarrifka lacagaha ee hadda.
1 Euro maanta waa 617.46 Oo shilin Soomaali ee bangiga Yurub. 1 Euro wuxuu qaali noqday 27.39 Oo shilin Soomaali maanta ee Bangiga Yurub. Euro sicirka sarrifka ayaa kor u kacaya maanta Sida ku xusan xogta yurubiyanka, Oo shilin Soomaali Maanta, 1 Euro kharashyada 617.46 Oo shilin Soomaali ee bangiga Yurub.
Beddelaan Euro In Oo shilin Soomaali Euro In Oo shilin Soomaali ku nool suuqa sarrifka Forex Euro In Oo shilin Soomaali taariikhda qiimaha sarrifka
Euro In Oo shilin Soomaali Heerka Sarrifka maanta 24 May 2022
Aad bay ugu habboon tahay in la isbarbardhigo Euro to Oo shilin Soomaali sicirka sarrifka ee maalmihii ugu dambeeyay miiska sicirka sarrifka ugu dambeeyay ee boggan. Jadwalka waxaa ku jira sicirka sarrifka maalmihii ugu dambeeyay. Isbarbar dhig heerka sarrifka Euro to Oo shilin Soomaali dhowrkii maalmood ee la soo dhaafay si aan u fahamno dhaqdhaqaaqa heerka sarrifka. Saadaalin sarrifka Euro to Oo shilin Soomaali berrito, iyadoo lagu saleynayo xogta ku saabsan qiimaha sarrifka maalmahan.
Waayo 1 Euro waxaad u baahan tahay inaad bixiso 617.46 Oo shilin Soomaali. Waayo 5 Euro waxaad u baahan tahay inaad bixiso 3 087.31 Oo shilin Soomaali. Qiimaha 10 Euro to Oo shilin Soomaali ayaa hadda la mid ah 6 174.63. Qiimaha 25 Euro sicirka sarrifka waa 15 436.57 Oo shilin Soomaali. 1 Euro wuxuu hadda la mid yahay 617.46 Oo shilin Soomaali. Heerka rasmiga ah ee bangiga qaranka. 1 Euro ayaa kor u kacay 27.39 Oo shilin Soomaali maanta iyadoo loo eegayo heerka sarrifka lacagaha ee dalka uu hoggaamiyo.
617.46 SOS 3 087.31 SOS 6 174.63 SOS 15 436.57 SOS 30 873.13 SOS 61 746.26 SOS 154 365.65 SOS 308 731.30 SOS
Marka loo eego 1 000 SOS waxaad ubaahantahay inaad bixiso 1.62 Euro . 8.10 Euro, qiimaha 5 000 Oo shilin Soomaali sicirka sarrifka maanta. 10 000 Oo shilin Soomaali hadda waa 16.20 Euro. 25 000 Oo shilin Soomaali sicirka sarrifka ayaa ah 40.49 Euro. Euro sicirka sarrifka ayaa kor u kacaya maanta Oo shilin Soomaali. 1 Euro hadda waa qaali 617.46 Oo shilin Soomaali - heerka sarrifka ee bangiga qaranka.
1.62 EUR 8.10 EUR 16.20 EUR 40.49 EUR 80.98 EUR 161.95 EUR 404.88 EUR 809.77 EUR